Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Sh/hoose iyo saraakiil ku dhimatay qarax ka dhacay duuleedka Wanlaweyn – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Sh/hoose iyo saraakiil ku dhimatay qarax ka dhacay duuleedka Wanlaweyn
Waxaa faah-faahin dheeraad ah laga helayaa qarax maanta ka dhacay duuleedka degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose, halkaasi oo lala beegsaday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan militeriga dowladda federaalka Soomaaliya.
Xilliga saraakiishaan qaraxa lala eegtay ayaa la sheegayaa inay kusoo wajahnaayeen dhinaca degmada Wanlaweyn, halkaasi oo ay aroortii saakay dagaal kusoo qaadeen dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Saraakiisha ku dhintay qaraxaasi ayaa la sheegayaa inay ka tirsanaayeen guutada 6-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna kala yihiin sida soo socota:-
1- Xuseen Cismaan Xeyle oo ahaa abaanduulihii guutada 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
2- Maxamed Xasan Baakaati oo isna ahaa taliye unug oo ka tirsan guutada 6-aad.
Maxamed C/laahi oo ka mid ah saraakiisha guutada 6-aad ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay geerida saraakiishaan qaraxa lagula eegtay duuleedka degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose.
Sarkaalkaan ayaa sidoo kale beeniyay in Al-shabaab ay gaadiid dagaal iyo saanad militeri ah la wareegeen, waxaana uu taasi badelkeeda sheegay in ciidamada dowladda ay dileen xubno ka tirsan ciidankii Al-shabaab ee weeraray saldhigayada Warmaxan, Tixsiile iyo Garas Wandiinle oo dhamaantood ka wada tirsan degmada Wanlaweyn.
Dhinaca kale, Alshabaab ayaa shaacisay in weerarkii saakay ay qaadeen deegaanada Warmaxan, Tixsiile, Garas Wandiinle oo ka wada tirsan degmada Wanlaweyn, ay ku dileen illaa 19 askari islamarkaana ay ku qabsadeen labo gaari oo kuwa dagaalka ah, taas oo ay beeniyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee, waa weerarkii u horeeyay oo ay dagaalyahanada Al-shabaab ku qaadaan saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidanka militeriga Soomaaliya, tan iyo markii uu doorashada ku guuleystay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.